Omume - “nduku usoro” magazine
Don Field Day ga-achịkọta ihe karịrị ụlọ ọrụ agribusiness 160
Isi Isi na-aga News Ihe omume
Nkenke maka AgroCode Talk2 maka ndị na-agụ Sistemu Potato
Emere nzukọ AgroCode Talk nke abụọ na-anọghị n'ịntanetị n'oge na-adịbeghị anya na oghere azụmahịa Boiling Point na Moscow. Na nzukọ ahụ, ha tụlere ihe teknụzụ taa ...
Ihe oru ngo "izu nke ngalaba ebute ụzọ nke akụnụba": ngọngọ ọrụ ugbo: site na June 7 ruo 9
Na June 7 na ANO VO "Mahadum nke Innopolis" izu alaka ụlọ ọrụ na-amalite. Ndị ọkà mmụta sayensị ndị isi nke RGAU-MSHA ga-esonye na mmemme ahụ ...
VI ogbako "ProStarch 2022" e mere na Moscow
Na Mee 20, 2022, ọgbakọ “ProStarch 2022: Trends in the Deep Grain Processing Market” mere na Moscow, nke Association of Enterprises haziri…
Igwe ọrụ ugbo ọgbara ọhụrụ na-etinye ọmụmụ ala n'ihe egwu
Igwe ọrụ ugbo nke oge a na-enwe mmetụta dị njọ na ọmụmụ ala ma na-ebute ọdachi ndị na-emere onwe ha. Nkwubi okwu a bụ otu ndị ọkà mmụta sayensị si Sweden, Switzerland...
Kedu teknụzụ ndị ọrụ ugbo Russia chọrọ?
A na-eme atụmatụ ahịa maka drones ugbo ugbu a na ijeri $ 32,4, ọnụọgụ ngwaọrụ maka iji ọrụ ugbo na mbara igwe ga-eto ruo…
A na-atụle atụmanya nke injinịa ugbo na ihe ngosi Zolotaya Niva
Emere ihe ngosi a na mpaghara Ust-Labinsk nke mpaghara Krasnodar. Ihe dị ka ndị na-emepụta ngwá ọrụ 400 sitere na Russia na mba ọzọ na-esonye na ya, akụkọ ...
A zụrụ ụdị nduku ọhụrụ isii na Udmurtia
Ndị ọrụ nke Institutelọ Ọrụ Nchọpụta Agriculture (NIISH) nke Udmurt Federal Research Center nke Alaka Ural nke Russian Academy of Sciences ewepụtala ụdị nduku ọhụrụ isii na-edochi anya isii emebere maka ...
Izu Siberian Agrarian
si Tatyana Galanina
Site na Nọvemba 9 ruo Nọvemba 11, 2022, a ga-eme ihe ngosi International Agro-Industrial Exhibition "Siberian Agrarian Week" na saịtị nke Novosibirsk Expo Center International Exhibition Complex.
International Potato Center ewepụtala akwụkwọ pụrụ iche
Anyị nwere obi ụtọ ịkpọsa mbipụta nke akwụkwọ Innovation in the Root, Tuber and Banana Nutritional System: Creating Value for Inclusive Outcomes....
Peeji 1 n’ime 12 1 2 ... 12 Ọzọ